Disney plus nwere Harry Potter? - LifeBytes | LifeBytes
Disney plus nwere Harry Potter?
Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | Emelitere ka 31/05/2022 08:37 | Ihe ọchị
Na ọtụtụ usoro na ihe nkiri nyiwe na anyị nwere ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na-echefu ebe anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe nkiri kacha amasị anyị. Igwe nchọta na-ejupụtakarị ajụjụ gbasara ma Disney Plus nwere Harry Potter, ma ọ bụ na anyị nwere ike ikiri oge Dọkịta na Netflix kacha ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-achọ ihe nkiri Harry Potter na ị na-eche ma Disney Plus nwere ha, ebe a ị ga-ahụ azịza ya. N'agbanyeghị na ị nwere ike ọ gaghị amasị gị.
1 Disney Plus: kedu katalọgụ o nwere?
2 Disney Plus nwere Harry Potter?
3 Harry Potter ọ ga-anọ na Disney Plus n'ọdịniihu?
4 Ebe ọzọ ị nwere ike ịhụ Harry Potter?
5 Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịhụ na HBO Max
6 Ihe nkiri dị ka Harry Potter
6.2 Ụmụ ụmụ
6.3 Upside Down Ime Anwansi
Disney Plus: kedu katalọgụ o nwere?
Disney Plus bụ ikpo okwu n'ime nke ị ga-ahụ ọmarịcha ọlama ugbua na nke gara aga. Ọ bụ eleghị anya, yana Netflix, nke nwere ọtụtụ edemede na-enye gị ohere ikiri ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri na ụdị ndị ọzọ.
Na mbụ, n'ihi aha ahụ, e chere na ọ ga-abụ naanị maka ụmụaka. ma eziokwu bụ na o nwere ọtụtụ ihe ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, isi ihe abụọ bụ Marvel na Star Wars. Naanị ya na ha ka ọ na-enwe ike ịgbakwunye ọtụtụ ihe nkiri, usoro na akwụkwọ akụkọ na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ekiri ya, na mmalite ya na-emekarị ka mmasị dị ukwuu.
Tinyere nke a, ị nwere akwụkwọ akụkọ, dị ka nke National Geographic na ndị ọzọ na-adọrọ mmasị maka ịbụ ndị a ma ama na-eme ya.
Nke nta nke nta, ọ na-agbakwụnyekwu ọdịnaya na katalọgụ ya, yana ikpo okwu kpakpando nke gụnyere n'ime Disney. Ya mere, ị na-enwe mmasị ugbu a:
Ihe niile DisneyIhe nkiri, usoro, mkpirisi eserese, gụnyere The Simpsons.
Pixar: na ihe nkiri ya ndị na mbụ na-asọrịta mpi Disney ma bụrụ akụkụ nke ya ugbu a.
iju: na ihe nkiri, usoro na akwụkwọ akụkọ gbasara otu esi eme ha.
Star Wars: nwekwara usoro na ihe nkiri.
National Geographic: ya na akwụkwọ akụkọ.
Star: ebe a ị ga-ahụ ma fim na usoro maka ndị ọzọ okenye na-ege ntị.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị debanyere aha na Disney Plus ma chọọ ịhụ ihe nkiri Harry Potter Ọ dị anyị nwute ịgwa gị na ọ gaghị ekwe omume. Disney enweghị ihe nkiri ndị ahụ na katalọgụ ya, o nwebeghịkwa ha mbụ., ebe ọ bụ na enwere ike ịhụ ha na Amazon Prime na, ụfọdụ, na Netflix. N'ezie, ha anọghị na nyiwe ndị a (Amazon Prime nwere ike inye gị ohere ịgbazite ma ọ bụ zụta otu).
Ugbu a, Eziokwu bụ na ihe nkiri Harry Potter niile, Saga dum, gụnyere Fantastic Beasts abụọ na ebe ịchọta ha A na-edebe n'ime katalọgụ HBO Max. Iji hụ ha, ị ga-aga n'elu ikpo okwu a wee denye aha.
Harry Potter ọ ga-anọ na Disney Plus n'ọdịniihu?
Anyị na-amalite site na ndabere nke ị na-amaghị. Mana taa, Ihe nkiri Warner niile bụ nke HBO Max ma naanị ebe ahụ ka ị ga-ahụ ha. Yabụ, ọ bụrụ na anyị lekwasị anya na data dị ugbu a, eziokwu bụ na o yighị ka Disney Plus ga-enweta ikike Harry Potter n'ọdịniihu. Nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị eme, ma ugbu a, anyị ahụghị na ọ ga-ekwe omume.
Ebe ọzọ ị nwere ike ịhụ Harry Potter?
Tupu anyị agwa gị na Harry Potter saga niile dị na HBO Max, mana N'ezie enwere ọtụtụ ebe ị ga-ahụ ya. Anyị depụtara gị ha ma ọ bụrụ na ị nweghị ndenye aha n'elu ikpo okwu a:
play Store: Ebe ị nwere ike ịzụta ihe nkiri niile, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ọnụ.
Apple: Ị nwere ike ịgbazite ha na ego a kapịrị ọnụ, n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe nkiri niile.
Youtube: Na Youtube ị nwere ike ịgbazite ma zụta ha.
Amazon: Mbipụta onye nchịkọta nwere vidiyo 8 nke ihe nkiri na ụfọdụ mgbakwunye. Ọ bụrụ na ịnweghị HBO Max ma na-amasị gị ihe nkiri ndị a, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ kacha ọnụ ala.
Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịhụ na HBO Max
Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị ga-ekpebi ịnweta HBO Max ị kwesịrị ịmara na ị ga-enwe mgbakwunye na ha agaghị enye gị n'elu ikpo okwu ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ihe na-amasị ndị Fans.
ENa Jenụwarị 1, 2022, ewepụtara akwụkwọ akụkọ Harry Potter: Laghachi na Hogwarts, nzukọ maka ncheta afọ 20 nke ọtụtụ n'ime ndị na-eme ihe nkiri nke saga gara, na ha nwere obiọma iji kpughee ụfọdụ ihe nzuzo nke ndị na-eme ihe nkiri na ihe nkiri a na-amaghị.
Ya mere, e wezụga ihe nkiri, ị ga-enwe akwụkwọ akụkọ ọzọ iji hụ ka agwa ndị ahụ siri gbanwee na ihe niile a na-amaghị gbasara ihe nkiri ahụ.
Ihe nkiri dị ka Harry Potter
Agbanyeghị na Disney Plus enweghị Harry Potter, nke ahụ apụtaghị na o nweghị ihe nkiri nwere ike ịsọ mpi ọkachamara ọkachamara. N'ezie, anyị na-akwado ole na ole:
Na nke a ọ bụghị onye na-eme anwansi, ma ọ bụ arụsị ma dị ka nke a ọ ga-azụ ma mụta ihe, Ya mere, anyị ga-ebi ndụ ha na-eme njem n'ogige ọzụzụ nke chi na anwansi e kere eke.
enwere naanị ihe nkiri abụọ, Saga kwụsịrị mana enwere akwụkwọ na-aga n'ihu na ihe omume nke nwoke a na-eme ihe nkiri na ndị enyi ya.
Ọ bụrụ na ị tolitela na Princess Disney na "ndị amoosu ọjọọ" ha, ị ga-enwe mmasị na saga a. N'ezie ọ bụ ntụgharị nke oge ochie, na ụmụ ndị eze nwanyị na ndị dị njọ.
N'ime ndị ị ga-ahụ bụ nwa Cruella de Vi, ada Maleficent, nwa Jafar ma ọ bụ ada nke ajọ eze eze Snow White, Grimelda ma ọ bụ Grimhilde. N'ezie, a ga-enwekwa ụfọdụ ndị dị mma, na ka ha na-ekwu maka ogbo gafere akụkọ ifo, ha na-aghọkwu eziokwu.
Upside Down Ime Anwansi
Nke a abụghị ihe nkiri a ma ama, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụkwa anwansi. N'ime ya anyị na-ahụ protagonist nke na-abanye na Sage Academy of Magic Training. Otú ọ dị, n'ihi enweghị ike ya, a na-ekenye nwa agbọghọ ahụ na klas maka "mgbanwe anwansi".
Ugbu a ịmara ma Disney Plus nwere Harry Potter, ihe ọzọ ị nwere ike ịjụ onwe gị bụ ma ọ bara uru ịnwe HBO Max. Katalọgụ ya emezubeghị, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị otu n'ime nyiwe kachasị ọnụ na nso nso a na-enye ọtụtụ onyinye bara uru (inwe ya ruo mgbe ebighi ebi na ọkara ọnụahịa, dịka ọmụmaatụ), nke nwere ike ime ugboro ugboro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Ihe ọchị » Disney plus nwere Harry Potter?
Ụdị ụgbọ elu: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ na otu esi eme ya na gbanyụọ ya
Olee otú mara ma ọ bụrụ na m gafere tiori